Maxay tahay aragtida yaabka leh ee Roy Keane uu ka qabo xaaladda Ozil iyo Arsenal? – Gool FM
Maxay tahay aragtida yaabka leh ee Roy Keane uu ka qabo xaaladda Ozil iyo Arsenal?
(London) 24 Abril 2020. Halyeyga Manchester United ee Roy Keane ayaa gaashaanka u daruuray eedeymaha loo soo jeediyo ciyaartoyda waaweyn ee ka ciyaara Premier League, taasoo ku aaddan diidmada ay kaga soo hor jeesteen jaridda mushaharadka ay kooxahooda ka qaataan inta lagu gudo jiro aafada coronavirus.
Burburiyihii hore ee Red Devils ayaa hoosta ka xarriiqay inuu ka calool xumaado marka ciyaartoy badan la dhaliilo sida uu u sheegay Sky Sports.
Waxa uu Keane dib u milicsaday xilliguu uu ka tagay United inuu la xiriiray ciyaaryahanno ka tirsan kooxo waaweyn, isla markaasna ay leeyihiin milkiilayaal hodan ah, sidaas oo ay tahayna lagu cadaadiyo inay sameeyaan mushahar dhimis, balse isagu uusan aqbali lahayn inuu mushaharkiisa jari isagoo koox wayn u ciyaaraya.
“Qofna shaqadiisa ma ahan mushaharkaada, mushahaharkaadana adaa qaadaneysid, haddii aad rabto si deeqsinnimo ah, waad u sameyn kartaa” ayuu yiri Roy Keane.
Waxaana uu intaas ku daray inuu jiro mugdi badan isagoo yiri:
“Uma maleynayo inay dadka qasab ku tahay inay rumeystaan wax walba oo ay aqristaan kuna aaddan ciyaaryahannada.”
Waxa uu sidoo kale dooddiisa ku difaacay in mushaharka heshiiska ku xusan ay tahay mid shaqsiyadeed oo ciyaaryahanka quseyso, dadka laga rabo inay jaraan mushahaharkoodana ay yihiin dadka Bilyanaadka heysta kooxda ugu sarreeya.
Roy Keane ayaa carrabka ku adkeeyay kaliya inuu ka hadlayo kooxaha waaweyn, balse uu dareemayo xaaladda kooxaha yaryar, ciyaartoyda kooxaha yaryarna laga rabo inay iyaga dareemaan xaaladda dhaqaale ee kooxda.
“Kooxaha waaweyn way bixin karaan lacagta ciyaartoyda, in shaqsiyaad gaar ah la eedeeyana waa caddaalad darro. Shaqsiyad kala duwan ayaad ku joogtan qolka labiska, ciyaartoyda qaar mushaharkooda iyagaa ku bixiya dadka kale ee dunida si deeqsinnimo leh, kuwaas u ogolaada inay u sameeyaan waxay doonaan hay’adda NHS ama saddaqada ay rabaan, balse aniga waxaan u dagaallamayaa dhanka ciyaartoyda” ayuu hadalkiisa kusoo xiray kabtankii hore ee Manchester United.
Miyey Kooxda Chelsea qandaraaska u kordhinaysaa Weeraryahankeeda Olivier Giroud?